Mmekorita nke Apple na Nike siri ike maka Apple Watch Series 2 | Esi m mac
Apple na Nike mmekorita siri ike maka Apple Watch Series 2
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | Apple Watch, ọtụtụ
Otu n’ime ihe ịtụnanya anyị hụrụ n’ime isi okwu Apple ikpeazụ bụ Mmekọrịta Nike na usoro 2 nke Apple Watch. N'agbanyeghị nke a, mmekorita a abụghị ihe ọhụụ, ebe ha bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na-emepe ngwa maka iOS nwere ike iji ngwa ngwa nke ụdị akara ha na-ekwurịta okwu.
N'aka nke ọzọ, ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ iwepụta ngwaahịa "ngwakọ" ebe otu akụkụ bụ Apple Watch na eriri ya bụ ụdị ejiji Nike.. Ibu ụzọ, ọ nwere ike ịdị ka otu mmekorita, dị ka eriri Hermes, mana ọ bụrụ na ị lelee ya anya, njikọ a na-achụ uru dị oke maka ụlọ ọrụ abụọ ahụ.
Iji ghọta nke a, ka anyị chee maka ojiji anyị mere nke mbụ Apple Watch: Elekere, ajụjụ nke ọnyà ngwa (oge, ozi, ụfọdụ ncheta ma ọ bụ ngosi), ahụike ngwa, wdg. N'aka nke ọzọ, n'ihi adịghị ike nke ụdị izizi a, tụfuru ngwaọrụ a iji jiri mkpụrụedemede jiri eme ihe dị ka ịgba ọsọ, ịgba ígwè, igwu mmiri, wdg. Ihe kpatara ya doro anya: enweghi GPS na eriri nke dị mfe maka egwuregwu, na-ewepụ Apple Watch ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi nke Fitbit ma ọ bụ ihe yiri ya.
Ma olee uru mmekọrịta a na-eweta? edepụtara Apple Watch n'ọtụtụ elekere elektrọnik, nwere ike ijikọ na ngwaọrụ iji mekọrịta. N'aka nke ọzọ, usoro 2 yana eriri Nike, na-eme ka Apple lelee ezigbo anya Ibu: N'ihi GPS ị nwere ike ịme egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ yana enweghị nkwanye ùgwù na-enye gị ohere ịme egwuregwu mmiri. Tụkwasị na nke ahụ, mgbaaka a mebiri emebi na-eme ka ọsụsọ anụ na ọsụsọ gbaa. Na n'ikpeazụ ikpo okwu Nike + Run Club, Ọ bụ ezigbo enyi maka ahụmịhe zuru ezu maka ndị na-eme egwuregwu.
Na mgbakwunye, ahịa ahụ ghọtara ya n'ụzọ ahụ. Site n'oge ewepụtara Apple Watch Nike +, mbak Fitbit dara. Ya mere, ihe niile yiri ka ọ na-egosi nke ahụ na Apple na Nike mmekota ebe a ka ịnọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na Nike mmekorita siri ike maka Apple Watch Series 2
Mkpọchi - njikwa paswọọdụ na vault faịlụ, n'efu maka obere oge
Tim Cook chetara Steve Jobs n'akwụkwọ ozi o degaara ndị ọrụ